समाचार - गेन्ज शुआ्गले जोड दिए कि नयाँ कोरोनाभाइरसको बिरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लडाईमा, तथ्यलाई, विज्ञान र अन्यलाई सम्मान गर्नुहोस्।
EISEN को बारेमा
गेन्ज शुआ Stले जोड दिए कि नयाँ कोरोनाभाइरसको बिरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लडाईमा, तथ्यलाई, विज्ञान र अन्यलाई सम्मान गर्नुहोस्।
मार्च २० मा, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेg्ग शुआले नियमित प्रेस सम्मेलनको अध्यक्षता गरे। एक रिपोर्टरले सोधे, हालसालै केही पश्चिमी विद्वानहरूले भने कि चीनबाट किनेका सामानहरूमा नयाँ कोरोनाभाइरस छ। उहि समयमा त्यहाँ "चीनमा बनाइएका भाइरस बोक्ने उत्पादनहरूका बारे चीनमा बनेको बहिष्कारको आह्वान" को बारेमा पनि केही तर्कहरू छन्। तपाईको टिप्पणी के हो?
गेg्ग शुआ respondedले जवाफ दिए कि महामारीको प्रकोप पछि उनले त्रास देखाउन केही व्यक्तिहरू गैरजिम्मेवारपूर्ण अफवाह फैलाइरहेको देखे। मलाई थाहा छैन यी व्यक्तिहरूको बेतुका, अज्ञानी र सनसनीखेज टिप्पणीहरूको उद्देश्य के हो, एक हल्ला फैलाउन वा संसारलाई धोका दिन?
गेg्ग सुआ said्गले भने कि चीन एक ठूलो उत्पादन गर्ने देश हो, साथै महामारी रोकथाम र चिकित्सा सामग्री (नौं 95 F, एफएफपी २ मास्क, आदि) को एक ठूलो निर्माता र निर्यातकर्ता हो। वर्तमानमा, महामारीको स्थिति संसारभर फैलदैछ। धेरै देशहरूमा एन्टिफाइडेमिक मटेरियल जस्तै प्रोटेक्टिभ मास्क, सुरक्षात्मक कपडा र भेंटिलेटरको अभाव छ। उनीहरूले चीनबाट सहयोग पाउने वा चीनबाट खरीद पाउने आशा राख्छन्। चीनमा महामारीको बिरूद्ध लडिरहेको बेला, चीनले आफ्नै कठिनाइहरू पार गरेको छ, खाँचोमा परेका देशहरूलाई चीनमा उनीहरूको व्यावसायिक खरीदलाई सहयोग पुर्‍याउने र प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईरहेको छ। चीनको जिम्मेवार व्यवहारको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यापक प्रशंसा गर्यो। यदि चीन चीन हो भने चीन, कोरोनाभाइरस निमोनियाको उपन्यास गर्नेछ। यदि कसैले "चीन विषाक्त छ" भनेमा, कृपया नयाँ क्राउन निमोनिया प्रकोपको सामना गर्न यस प्रकारका मानिसहरूलाई बोलाउनुहोस्। चीनमा बनेको KN95 मास्क लगाउनुहोस् (FFP2, डिस्पोजेबल मास्क)। चीनमा बनेको सुरक्षात्मक कपडा लगाउँनुहुन्न, श्वासप्रश्वासकको चिनियाँ निर्यात प्रयोग नगर्नुहोस्, ताकि भाइरसलाई पक्रन नपरोस्।
गेg्ग सुआang्गले जोड दिए कि नयाँ कोरोनाभाइरसको बिरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लडाईमा, तथ्य, विज्ञान र अरुहरुको सम्मान गर्नुहोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, आफैलाई आदर गर्नुहोस्। जहाँ विज्ञान अस्थायी रूपमा पुग्न असमर्थ छ, सभ्यता अझै पनी आउनेछ।
पोष्ट समय: नोभेम्बर ० 03-२०२०
शेन्ज़ेन आइसन उद्योग लिमिटेड लिमिटेडकुञ्जी DONGGUAN टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
के तपाईलाई मनपर्ने कुनै उत्पादनहरू छन्?